Medieval Fantasy RPG (Choices Game) 6.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Medieval Fantasy RPG (Choices Game)
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
This package of text-based games includes the entire Wizard's Choice series (6 large adventures), Demon's Choice (6 chapters so far), all of the Rogue's Choice series (12 chapters so far), and Ranger's Choice. Although you can find these stories elsewhere by Delight Games, this package was created specifically to deliver the Ring City Universe of stories, enhanced with new features including achievement/point progress tracking. Also, this package has been designed to beafree game where you refresh your virtual currency with your achievements and through rewarded videos. This is the ultimate package of Delight Games interactive fiction for you medieval fantasy fans.
မကျြမှောကျခ Twisted နဲ့အတူ⚔️ old-school: D & D ကို-style TEXT Adventures!
သင်အဓိကဇာတ်ကောင်များအတွက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ဘယ်မှာဟောင်းကျောင်းကို: D & D-စတိုင် RPG ဂိမ်းကိုကြိုက်သည်မှန်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပါ! စာသားမ-based ဂိမ်း၏ဤမော်ကွန်းစီးရီးအတွက် wizard ကိုတစ်ဦး succubus နှင့်လူဆိုးစာရင်း Play ။
ဤတွင်ရှေးကျောင်းစရိုက်မဆိုလိုပါ။ ချဉ်း-ထံမှဖို့ရီစရာများနှင့်အံ့သြစရာကတော့မော်ကွန်းမှအောင်မြင်မှုများရာပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ သငျသညျရွေးချယ်မှုလုပ်အမျှ stats ခဲထားတဲ့ "ချက်ချင်းအသေခံ" အတူတက်ဆင်းသွားပါ။ သငျသညျဆိုင်းထားခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသဘောမျိုးဖြင့်သင်တို့ကိုဆုတ်ထားတာနေချိန်မှာရွေးချယ်မှုအပေါ်ကိုပြန်မသွားဘို့အဆင်သင့် options များရှိသည်။
⚔️ ရိုးရှင်းပြီး, စွဲ Gameplay ။
အလယ်ခေတ် Fantasy RPG မာစတာမှမရှိသေးပါခက်, သင်ယူဖို့အသေကောင်-ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ဖတ်နှင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေလျက်, ကန့်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏အကျိုးဆက်များကိုအမြဲသိသာမရှိကြပေ။
ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုတစ်စီးရီးနဲ့တူရဲ့, ဒါပေမယ့် ပို. ပင်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ် gamified!
မကြာခင်မှာပဲသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်း, သင်မြင်သောအရာကိုကားမောင်းနားထောငျနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်သင်တို့ရှေ့မှကစားကြမဆိုထက်ပိုမိုချမ်းသာတစ်ခု RPG ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်လိမ့်မည်။
⚔️ အကြီးအကျယ်ကောင်းစွာအတွေးများ-out အတ္ထုပ္ပတ္တိ PLAY!
လိမ်ယှက်ပုံပြင်လိုင်းများ၏ဤကြီးမားသောစီးရီးသန်း 1 ကျော်စကားများထလုပ်နေပါသည်!7နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသို့သွားပြီ!
သငျသညျဘုနျးတပြန်ပေးလော့၏ search အတွက်ဇာတ်ကောင်ကစားချွတ် start, ဒါပေမယ့်မကြာခင်သေစေနိုင်သောပူးပေါင်းကြံစည်မှုများနှင့်အပြိုင် University ၏လောကဓာတ်သို့ delve ။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်တစ်ဦး succubus (နတ်ဆိုး) ကစားပြောင်းရန်သကဲ့သို့, ပုံပြင်ဆက်လက်, ပြီးတော့တစ်ဦးလူဆိုးစာရင်း-တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ။
ဒါ့အပြင်, လမ်းပိုမိုရှိပဲ! တစ်ဦးကောင်း: D & D ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလိုပဲ, ကအဆုံးသတ်မထားဘူး။
⚔️တစ်ဦးရွေးချယ်မှုအတွက်လည်းပေးဆောင် အမှန်မှာအခမဲ့ NO ။
ကောင်းစွာ Play နှင့်သင်တစ်ပြားမှဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲအရာခပ်သိမ်းပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်ငွေကြေးနှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။ ထိုအောင်မြင်မှုများကိုဆင်းလိုက်ရှာ, မြင့်ရာထူးရဖို့, သူတို့ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်ဆုခခြဲ့သောဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့၏ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုကိုတန်ဖိုးထားကြဘူးသင်တို့ကိုငါအဲဒါကိုကောင်းကောင်းရကျိုးနပ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်, သင်မူကားရန်မလိုပါကြောင်းကိုငါသိ၏။ မရကြောင်း
များစွာသောရှေးခယျြမှု-based ဂိမ်းမတူဘဲ, သင်ရွေးချယ်မှုစေရန်ငွေကြေးဖြုန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုစသည်တို့ကိုကျောက်မျက်များ၏လိုအပ်ချက်အဘို့အသငျသညျမှပယ်ရံနှငျ့ပိမ "ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု" ဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့စာကိုလုယူမှမဆိုဤကဲ့သို့သောအရိပ်အမြွက်ရှိ၏။ သင်ရွေးချယ်!
⚔️ အစစ်အမှန်အခန်းကဏ္ဍ-PLAYING ။
အောင်မြင်ဖို့, သင်သည်သင်၏ဇာတ်ကောင်များ၏ဖိနပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားနှင့်ကသငျသညျပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်အရာကိုမရင့်လျှင်ပင်, သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏များအတွက်အကောင်းဆုံးရဲ့ဘယျသို့ပွုရပါမညျ။ ဒါကယုတ္တိဗေဒထက်ပိုမိုလိုအပ်သော်လည်းကိုလည်းသင်၏အကျင့်စရိုက်နှင့်သူ / သူမသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်တွေ့ခွအေနကေိုအဘို့အ empathy ။ ဒီသည်၎င်း၏စင် form မှာအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဖြစ်ပါတယ်။
⚔️ လွယ်ကူ ON ဘက်ထရီနှင့်သိုလှောင်။ တောင်မှ OFFLINE PLAY!
ဒီခံစားများစွာသောနာရီကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြီးမားတဲ့အပြန်အလှန်ပုံပြင်, ဖြစ်သော်လည်း, တကသေးသေးလေးကို download င်နှငျ့သငျပင်အော့ဖ်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။
စာသားမ-based ဂိမ်း၏ဤအထုပ်, နတ်ဆိုးရဲ့ရွေးချယ်မှုများ (6 အခန်းကြီးယခုအချိန်အထိ), (ယခုအထိ 12 အခန်းကြီး) ကို Rogue ရဲ့ရွေးချယ်မှုစီးရီးအားလုံးနှင့် Ranger ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုံးကို Wizard ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုစီးရီးများ (6 ကြီးမားသော Adventures) တို့ပါဝင်သည်။ သငျသညျပျြောမှေ့ဂိမ်းများအားဖြင့်တခြားနေရာကဤပုံပြင်များရှာတှေ့နိုငျပေမဲ့လည်းဒီအထုပ်ခြေရာခံအောင်မြင်မှု / အမှတ်တိုးတက်မှုအပါအဝင်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူပိုမိုပုံပြင်များ၏ Ring ကိုစီးတီးဠာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအထူးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီအထုပ်သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ဆုခခြဲ့သောဗီဒီယိုများအားဖြင့်သင်တို့၏ကို virtual ငွေကြေး refresh ဘယ်မှာအခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အလယ်ခေတ်စိတ်ကူးယဉ်ပရိတ်သတ်တွေများအတွက်မွေ့လျော်အားကစားပြိုင်ပွဲအပြန်အလှန်စိတ်ကူးယဉ်၏အန္တိမအထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.21k 2.98M
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Medieval Fantasy RPG (Choices Game) အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.9
ထုတ်လုပ်သူ Delight Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.delightgamesllc.com/privacy-policy
App Name: Medieval Fantasy RPG (Choices Game)
Release date: 2019-07-31 04:01:51
လက်မှတ် SHA1: E5:81:99:24:C6:28:A9:82:3C:5E:85:55:6A:2B:26:4A:42:0B:66:37
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Sam Landstrom
Medieval Fantasy RPG (Choices Game) APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ